Home Wararka Jadwalka doorashada kuraasta Xildhibaanada Ceelwaaq oo la shaaciyey
Jadwalka doorashada kuraasta Xildhibaanada Ceelwaaq oo la shaaciyey
Qabashada doorashada kuraasta Ceelwaaq ayaa ka dhigan in dhammaan doorashada golaha shacabka la dhameyn doono 27-ka April, maadaama kuraastaas ay yihiin kuwa kaliya ee harsan, ayada oo la filayo in HirShabeelle ay doorashadeeda dhameyso xilligaas kahor.
Guddiga doorashada heer federaal ayaa Khamiistii sheegay inuu go’aankan gaaray markii uu arkey inay lagama maarmaan tahay 16-ka kursi ee taalla Garbahaareey inaysan ka harin hanaanka doorashada dalka, xilli maanta la dhaariyey xildhibaanada cusub.
Waxa uu sidoo kale sheegay inay caqabado amn ku hor gudban yihiin inay doorasho ku qabsoonto Garbahaareey, islamarkaana maamulka Garbahaareey ay diideen in xubno ka socda Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka ee Heer Federaal ay ku tagaan booqasho loogu kuur geli lahaa in la soo hubiyo xaaladda Amniga magaalada Garbahaareey.
Previous articleBeesha Caalamka oo soo dhaweysay Dhaarinta Xildhibaanada & hore u socodka Doorashada
Next articleXildhibaan Beerey oo Ka Guuleystay Xildhibaankii NN ee C. Carabow.
Musharaxiinta Madaxweynimo Galmudug ayaa soo saaray baaq culus
Shabaab oo markii u horeeysay maanta si toos ah u soo...